Iindaba -Itheknoloji yokwamkelwa kweminwe yeminwe phantsi kwesikrini se-TFT FoD iyenzeka
Inqanaba lokungena kokungena kweminwe phantsi kwesikrini lenyukile, uMceli mngeni nge-30% kwakamsinya ngo-2021
Kukho uqikelelo lwearhente, Itekhnoloji yokuqonda ngeminwe phantsi kwescreen yaphehlelelwa ngo-2018, Kulindeleke ukuba ubuchwephesha obuninzi nangakumbi obunokwenzeka bungeniswe kwiimveliso kulo nyaka. Kwaye kuhlolwe enye emva kwenye, Ngokukhawuleza ukuba i-2020, inqanaba lokungena kulindeleke ukuba linyuke ngokukhawuleza, kuqikelelwa ukuba inqanaba lokungena kokuqwalaselwa kweminwe kwescreen kwizikrini zeefowuni eziphathwayo kunokuba ngumceli mngeni kwi-30% ngo-2021 no-2022. I-1.6 yezigidigidi zentengiso yeefowuni eziphathwayo, ngaphezulu kweefowuni eziphathwayo ezi-5 ziya kwazisa itekhnoloji yokuqonda iminwe phantsi kwesikrini.
I-Ultrasound recognition Ukuqwalaselwa kweminwe yeminwe phantsi kwescreen se-optical, Uluhlu ngalunye lokubonelela lubonakala
Okwangoku, itekhnoloji yokuqonda ngeminwe phantsi kwezikrini ezimbini ezinkulu, kubandakanya itekhnoloji yokuqonda ngeminwe phantsi kwescreen se-ultrasonic kunye netekhnoloji yokuqonda iminwe phantsi kwescreen imaging screen, Ukusuka kubavelisi beetshipup ukuya kwiimveliso ezinkulu ezisezantsi, Unikezelo ngokuthe ngcembe luthathe imilo .
phakathi kwabo, Itekhnoloji yokuqonda ngeminwe phantsi kwescreen se-ultrasonic ngokudibeneyo iphuhliswe ngumnxibelelanisi we-chip yeQualcomm kunye nomenzi wesisombululo sokuchukumisa i-GIS-KY Yecheng Technology. I-China ye-OFILM kunye netekhnoloji yeQualcomm egunyazisiweyo ukukhuthaza ngaxeshanye, Kwaye yafumana ukungeniswa kwemodeli yeflegi yakwaSamsung, nangona ulwakhiwo lulula, Kodwa itekhnoloji yokuvelisa inzima ngakumbi 、 Ixabiso likwaphezulu, Tshixa iifowuni eziphathwayo eziphezulu Inqanaba lokuqala, ngokulandelayo, misela umkhombandlela wolwandiso oluphakathi nolwinqanaba eliphezulu.
Itekhnoloji yokuqaphela iminwe yeminwe phantsi kwescreen se-optical ayinzima kangako kwezobuchwephesha, Okwangoku, unyuko olusemantla nolusezantsi lokutyala imali kutyalo-mali lwabona bavelisi baninzi, Ngokwaziswa kweefowuni ezinkulu zaseTshayina ezinje ngeHuawei kunye ne-OPPO. , Kukho amathuba okwandisa ngaxeshanye ukusuka kwiziphelo eziphezulu, eziphakathi ukuya phezulu, kunye nakwiimarike eziphakathi.
Abona baphambili be-chip chip ababoneleli ngetekhnoloji yokuqonda iminwe phantsi kwescreen se-optical kubandakanya iGoodix, etyalomali yiMediaTek, China Factory Silimicro, Taiwan Fektri Aegis, Duntai, njl. Iilensi ezibonakalayo zibandakanya iXinjuke, iOptical Optical, iLargan, kunye neYujingguang.
I-TFT LCD idibanisa ukubonwa kweminwe phantsi kwesikrini se-FoD, Yongeza ixabiso elongeziweyo
kodwa, Nokuba yeyiphi na itekhnoloji yokuqonda ngeminwe phantsi kwescreen, Kufuneka yenziwe phantsi kwesakhiwo sephaneli se-OLED, Ukuba umenzi wepaneli ye-TFT ye-LCD unokubonelela kuphela ngendiza yangasemva ye-TFT LTPS, Kwipaneli enkulu yemveliso ye-TFT ye-LCD, Nokuba izixhobo zezityalo zincitshisiwe, izibonelelo zabavelisi zikwanomda. Ke ngoko, ungalinyusa njani ixabiso elongeziweyo leepaneli ezincinci kunye neziphakathi kunye neefowuni eziphathwayo, ngumcimbi obalulekileyo weefektri zephaneli yeLCD yeLCD.
Ukugcina indawo yokuhlala, kwangaxeshanye yongeza ixabiso elongeziweyo le-TFT LCD yefowuni yeselfowuni, enyanisweni, Sele kukho abenzi beepaneli ze-TFT ze-LCD, kubandakanya i-Shenzhen Tianma kunye ne-AUO kutshanje etyale imali ngokusebenzayo kwisizukulwana esitsha Itekhnoloji yokuqaphela iminwe yeminwe phantsi kwesikrini se-FoD esidityaniswe kwi-backplane ye-TFT, Oko kukongeza umaleko woluvo lomfanekiso we-TFT ngqo kwi-backplane ye-TFT.
Nangona ukongeza olu luhlu lwenzwa yomfanekiso kwi-TFT LCD backplane, Kuqikelelwa ukuba iimaski ezingaphezulu ezili-10 zingafuneka kwinkqubo yokwenza ipaneli Ukuba ujonga i-OLED yangasemva ye-LTPS eneemaski ezili-10-15, ukongeza iimaski ezili-10 ukwenza isivamvo somfanekiso sinokubangela isivuno esisezantsi kakhulu. Kodwa ukuba usebenzisa i-Si njengeplani yangemuva kwaye ungeze iimaski ezili-10 ukwenza isivamvo somfanekiso, Mhlawumbi kukho ithuba lokunciphisa ifuthe leengxaki zesivuno, kwaye ngokuthe ngcembe ubonise izibonelelo zetekhnoloji yokuqonda ngeminwe phantsi kwesikrini se-TFT FoD